စပိုင်းယား ကသီဒရယ် ဘုရားရှိခိုးကျောင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
စပိုင်းယား ကက်သီဒရယ် ဘုရားကျောင်း*
တည်ရှိသည့် နိုင်ငံ ဂျာမနီနိုင်ငံ
စတင်သတ်မှတ်ခြင်း ၁၉၈၁ (ပဉ္စမအကြိမ်)
စပိုင်းယား ကက်သီဒရယ် ဘုရားကျောင်း (တရားဝင် အမည်အားဖြင့် "သည် အင်ပီရီယယ် ကက်သီဒရယ် ဘာဆေးလီကာ အော့ဖ် သည် အဆမ်းရှင်း အင်န် စိန့် စတီဖင်" လက်တင်အမည် အားဖြင့် "ဒိုးမပ်စ် ဆန်တေး မာရီယေး စပိုင်ယေး") သည် ဂျာမနီနိုင်ငံ စပိုင်းယားမြို့ တွင် တည်ရှိပြီး ရိုမန်ကက်သလစ် စပိုင်းယား ဘစ်ရှော့၏ ကျောင်းထိုင်ရာ နေရာ ဖြစ်ကာ ဘမ်းဘာ့ခ် အာ့ခ်ဒိုင်အိုးဆိ ဘစ်ရှော့၏ လက်အောက်ခံ ဖြစ်သည်။ ကက်သီဒရယ်ဘုရားကျောင်းသည် စိန့်မေရီ၊ စပိုင်းယား စိန့်သူတော်စင် နှင့် စိန့်စတီဖင်တို့အတွက် ရည်ရွယ် ဆောက်လုပ်ထားခြင်း ဖြစ်ပြီး "ကိုင်ဇာဒုမ်း ဇူး စပိုင်းယား" ဟု အများသိကြသည်။  ဆယ့်တစ်ယောက်မြောက် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ပိုင်းယပ်စ် မှ စပိုင်းယား ကက်သီဒရယ် ဘုရားကျောင်းအား ၁၉၂၅ ခုနှစ်တွင် ရိုမန်ကက်သလစ် ဘုရားကျောင်း၏ မိုင်နာ ဘာဆေးလီကာ အဖြစ် အဆင့်မြှင့်ပေးခဲ့သည်။
၁၀၃၀ ခုနှစ် ရောမအင်ပိုင်ယာ ဒုတိယမြောက် ကွန်နရက်၏ လက်ထက်တွင် စတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီး အရှေ့ပိုင်း၊ ၁၀၉၀ မှ ၁၁၀၃ အထိ အမိုးခုံး အမြင့် နှင့် ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာ အနီရောင် သဲကျောက်များဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော လျှောက်လမ်း ၃ ခုပါ အမိုးခုံး ဘာဆေလီကာ တို့သည် ပုံစံထုတ်ခြင်း ၏ အထွဋ်အထိပ် ဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်း ၁၁ရာစု နှင့် ၁၂ရာစု အတွင်း ရောမ ဗိသုကာပညာ၏ ထွန်းကားမှုများကို အလွန်ပင် ဩဇာသက်ရောက်စေခဲ့သည်။ ဆာလီယန် မင်းဆက်၊ စတောဖာမင်းဆက် နှင့် ဟပ်ဘာ့ခ် မင်းဆက် အင်ပိုင်ယာနှင့် ဘုရင်တို့၏ ရုပ်ကလာပ်များကို မြှုပ်နှံရာနေရာဖြစ်ပြီး ထိုကက်သီဒရယ် ဘုရားကျောင်းသည် ဘုရင်ခေတ် ဩဇာအာဏာ၏ ပြယုဂ်တစ်ခုပင် ဖြစ်သည်။  ကလန်နီ အဲဘီးဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ယိုယွင်းပျက်စီးနေသဖြင့် ဤကက်သီဒရယ် ဘုရားကျောင်းသည် အကြီးဆုံး ရောမ ဗိသုကာလက်ရာ ဘုရားကျောင်းတစ်ခု အဖြစ်တည်ရှိလျက် ရှိပြီး ဥရောပ ဗိသုကာပညာ၏ အလှည့်အပြောင်း တစ်ခု အဖြစ်သတ်မှတ်ထားကာ ၎င်းနှင့် ခေတ်ပြိုင်အချိန်က အရေးအပါဆုံး ဗိသုကာပညာ အထိမ်းအမှတ် အဆောက်အဦး တစ်ခု အဖြစ် တည်ရှိနေသည့်အပြင်  အကောင်းဆုံး ရောမ ဗိသုကာ ပညာ အထိမ်းအမှတ် အဆောက်အဦး တစ်ခု အဖြစ် တည်ရှိသည်။ 
၁၉၈၁ ခုနှစ်တွင် ထိုကက်သီဒရယ် ဘုရားကျောင်းအား ယူနက်စကို၏ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာ စာရင်းတွင် ယဉ်ကျေးမှုအရ အရေးပါသော နေရာတစ်ခု အဖြစ် ထည့်သွင်းခဲ့ပြီး "ဂျာမန် အင်ပိုင်ယာ၏ အဓိက ရောမ အနုပညာဆိုင်ရာ အထိမ်းအမှတ် အဆောက်အဦး" တစ်ခု အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ 
↑ speyer.de | Speyer Cathedral Archived 2006-06-13 at the Wayback Machine.. Information from home page. Retrieved5December 2006.(အင်္ဂလိပ်)
↑ Der Kaiserdom zu Speyer - Bauwerk။2January 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 April 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Romanesque architecture and art: Romanesque Architecture | Infoplease
↑ Romanesque architecture and art | Encyclopedia.com
↑ Der Kaiserdom zu Speyer - Zahlen Namen Fakten für besonders Eilige။ 10 December 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 18 April 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=စပိုင်းယား_ကသီဒရယ်_ဘုရားရှိခိုးကျောင်း&oldid=718342" မှ ရယူရန်